Ny tsy fahampian'ny fampahafantarana an'i Angi Roofing sy ny fifanoheran'ny tombontsoa dia tokony hisarika ny saina | Martech Zone
Mety ho fantatry ny mpamaky ny fanontanako fa nanampy orinasa maro tafo izahay hanangana ny fisian'izy ireo an-tserasera, hampitombo ny fikarohana eo an-toerana ary hitarika fitarihana ho an'ny orinasany. Mety ho tadidinao ihany koa fa i Angi (Lisitry ny Angie teo aloha) dia mpanjifa manan-danja izay nanampy anay tamin'ny fanatsarana ny milina fikarohana teo amin'ny faritra. Tamin'izany fotoana izany, ny fifantohan'ny orinasa dia nanosika ny mpanjifa hampiasa ny rafitra misy azy ireo hitaterana, hijerena, na hahitana serivisy. Nanaja ny orinasa sy ny mpanorina aho - ary nanampy azy ireo hampitombo ny orinasany izahay.
Nandritra ny 18 taona mahery, ny lisitry ny Angie dia tsy mbola nampiseho tombony isan-taona, ary nihevitra ny mpandinika fa tsy mitombina ny fanombanana ny orinasa. Tamin'ny taona 2017, nifindra avy amin'ny orinasa famandrihana mpanjifa i Angi ho amin'ny famokarana mpitarika ho an'ny orinasa voatanisa ao amin'ny fanadihadian'izy ireo. Tamin'ny taona 2021, namerina anarana izy ireo, nanavao ny tranokalany ary namoaka fampiharana vaovao manantena ny hiditra bebe kokoa amin'ny indostrian'ny serivisy an-trano. Tsy misy isalasalana fa betsaka kokoa ny fahafahana miditra amin'ny famokarana fitarihana noho ny orinasa famandrihana sarany izay nampitombo ny marika Angi.
Saingy mino aho fa lasa lavitra loatra izy ireo.
Olana mitombo miaraka amin'ny fitarihana sandoka
Iray amin'ireo eo an-toerana Indianapolis roofers mandany vola be miaraka amin'ny fifanarahana isan-taona miaraka amin'i Angi hitondra fiara mankany amin'ny orinasany. Niara-niasa tamin'i Bob sy ny orinasa tantanin'ny fianakaviany nandritra ny taona maro aho ary namana tsara izy na dia talohan'izay aza. Vao haingana i Bob dia nahatsikaritra fa nitombo hatrany izy fitarihana sandoka tamin'ny alalan'i Angi… ary nanomboka nihena ny fitarihana tsara amin'ny asa lehibe. Tsy hampahafantatra ny fanoloran-tenan'i Bob isam-bolana amin'i Angi aho, fa afaka milaza aminao aho fa fifanarahana lehibe izany. Tao anatin'ny telo volana, nahazo fitarihana sandoka 72 izy - samy nanaisotra ny saina tamin'ny raharahany.
Nanomboka niresaka tamiko bebe kokoa momba izany i Bob ary niezaka nitaraina tamin'i Angi… saingy tsy re ny fitarainany. Tsikariny fa nanomboka nivadika matetika koa ireo solontenany, izay nanampy trotraka ny fahasorenana. Izany rehetra izany dia tamin'ny fotoana nitomboan'ny tafo sy ny sisiny miaraka amin'ny firoboroboan'ny serivisy an-trano mifandray amin'ny areti-mifindra.
Angi Business Fitarainana
Ny lisitry ny Angie dia naorina tamin'ny teny am-bava tao afovoan'i Indiana ary marika tian'ny fianakaviana nampiasa azy io mba hanakarama orinasa eo an-toerana. Nihaona tamin'ny birao imbetsaka aho ary takatr'izy ireo tanteraka ny zavatra namidiny ho an'ny besinimaro fahatokiana… olana goavana eo amin'ny indostrian'ny serivisy an-trano.
Raha ny marina, nanana fifanarahana manan-danja iray aho tamin'ny lisitry ny Angie talohan'ny nandehanany ampahibemaso mba hanao fanadihadiana momba ny asa izay nataon'ny orinasa iray ho azy ireo mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra. Ny mpitarika ny orinasany dia tsy nanao risika na inona na inona mety handoto ny marika na hampidi-doza ny mpanjifany.
Tsy mino intsony aho fa izay no ifantohan'ny fikambanana. Ary misy fiatraikany manaitra.
Raha ny marina, tamin'ny Febroary 2022, ny Nofoanan'ny Better Business Bureau ny fankatoavan'i Angi noho ny tsy fahombiazan'ny orinasam-pandraharahana amin'ny fanarahana ny fepetra BBB izay mahafeno ny orinasa Accredited sy manaraka ny fenitra sasany.
Ny mololo farany: Angi Roofing
Iza ilay mpandraharaha tafo nojerena indrindra miaraka amin'ny hevitra tsara momba an'i Angi any amin'ny faritra ara-jeografika sasany? Mety ho gaga ianao raha mahafantatra fa izany no izy Angi Roofing.
Rehefa namoaka teny nindramina sy nihaona tamin'ireo mpanjifa mety ho azy i Bob, dia alaivo sary an-tsaina ny fahagagany nahita fa ny orinasa nandoavam-bola no nitarika azy dia nifaninana taminy mivantana. Marina izany… Nividy orinasa lehibe tafo any amin'ny faritra sasany i Angi ary nitarika ny fitarihana mivantana tao amin'ny orinasany manokana.
Araka ny The Motley Fool, nanomboka tamin'ny taon-dasa izany.
Nilaza i Hanrahan fa mitombo haingana ny orinasa, fantatra amin'ny anarana hoe Angi Roofing ankehitriny, efa misy amin'ny tsena am-polony eo ho eo, ary tsy ho ela dia ho dimy hafa. Ny tafo dia manana toetra be dia be izay mankasitraka ny orinasa amin'ny sokajy iray, anisan'izany ny sandan'ny baiko antonony avo sy ny tsena lehibe azo ampiasaina, izay tombanana ho 50 miliara dolara.
Ny filazana fa tezitra ny mpanjifako dia mety ho fanambaniana. Tsy nifandray taminy mihitsy i Angi ary nilaza taminy momba ny fahazoana azy, tsy nampahafantatra azy mihitsy fa mitondra fiara mankany amin'ny orinasany manokana izy ireo, ary tsy nilaza taminy mihitsy fa azo inoana fa hahazo ny ambiny izy. Nanenjika mpisolovava i Bob ary mitady ny hiala avy hatrany amin'ny fifanarahana nataony tamin'i Angi.
Manaova fikarohana any amin'ny tanàna sasany any afovoany andrefana amin'ny Google Maps dia ho hitanao fa manomboka maka ny fonosan-tsarintany eo an-toerana i Angi ary mampiroborobo Angi Roofing. Ary, mazava ho azy, mampiroborobo ireo orinasa ireo ho toy ny mpandraharaha tafo nojerena indrindra any… eny eee… izany no antony nividiananao azy ireo.
Aiza ny Vaomieram-barotra Federaly?
Tsidiho haingana ny tranokala Angi dia tsy hahita na inona na inona ianao fanambarana misongadina ity fifandraisana ara-bola ity. Raha manana fifandraisana boribory aho izay nanehoako tamin'ny mpanjifa fa mpitaona azo itokisana aho manome tsikera mahaleo tena momba ny orinasa… saingy tsy nambarako fa mitondra ny vola miditra rehetra ao am-paosiko manokana aho, mieritreritra aho fa tena mamitaka izany ary mitaky fanadihadiana. .
Tsy hahita fampahafantarana toy izany ianao ao amin'ny pejin'i Angi na ny azy Fikarohana tafo:
Noho izany, ny mpanentana lehibe indrindra ao amin'ny firenena amin'ny serivisy an-trano dia tsy manambara mibaribary amin'ny mpanjifa fa mitondra any amin'ny orinasany manokana ny mitondra azy, fa tsy manambara amin'ny mpanjifany orinasa fa tsy mifaninana aminy izy ireo, ary tsy misy manontany an'izany akory?
Tsy mampino izany.
Saingy tsy ara-dalàna ve izany?
Tsy milaza aho fa nanao zavatra tsy ara-dalàna i Angi teto. Entiko ho sain'ny rehetra fotsiny izany ary mino aho fa tokony hijery lalindalina kokoa an'io ny haino aman-jery sy ny FTC. Eo amin'ny endriny dia heveriko fa dokambarotra mamitaka ity. Farafaharatsiny, mino aho fa ny tsy fisian'ny fampahafantarana dia mampiseho faharatsian'ny fitsarana ataon'ny orinasa.
Tsy nahatoky mihitsy aho a tranokala famerenana izay inoako fa mahazo tolo-kevitra tsy miankina amin'ny loharanon-karena – mba hahitana fa ny orinasa natolotry ny Angi mihitsy. Ary amin'ny maha-mpanome tolotra ahy dia tsy handoa vola velively amin'ny fitarihana avy amin'ny mpifaninana amiko mivantana aho!
Tags: angi reviewsangi tafoangi roofing cincinnatiangi tafo indianapolisAngieLisitr'i AngieBBBFampahalalana ftcserivisy an-tranotaratrafmhevitrafahatokianahevitra azo antoka
Jun 20, 2022 ao amin'ny 6: 35 PM
Oay! Adala izany! Tena dia ilay dia natao nanomboka tamin'ny andro voalohan'i “Angie” ka hatramin'ny fomba fiasan'ny “Angi” ankehitriny. Na dia tsy mitovy aza, dia mampahatsiahy ahy ny sasany amin'ireo fanao ara-barotra avy amin'ny Amazon. Ny fanitarana azy ireo ho tsy mpanome "tsena" ho an'ny orinasa ihany fa mba ho lasa mpivarotra ihany koa ny vokatra ao an-tsena izay fehezin'izy ireo tanteraka dia toa tsy toy ny sehatra milalao amin'ny fomba rehetra na eritreritra azonao eritreretina samirery.